Chengdu waa la dhisi doonaa reer duugga ah baytariyada hogaanka-acid nidaamka dib u warshadaynta baaskiilada korontada
"Dhaqaalaha Information Daily" Wariye ka Chengdu City Environmental Protection Bureau, si loo hagaajiyo network dib, horumarinta xarumaha dib u warshadaynta iyo cayn kasta oo meelo, sidaa darteed wasakhaysan oo la dhimay ilaa ugu yaraan, Chengdu noqon doona dhismaha qashinka batteri hogaanka-acid .. .
Zhengzhou baaritaan buuxa oo khaladaad mooto waayeelka
Tan iyo December 15, waaxda boliiska Zhengzhou on baarayaan xadgudubyada mooto waayeelka wadada markii ugu horeysay si loo baaro loona soo rogaan ganaax ku meel gaar ah digniinta gaariga ama ganaax, darawalka la baari doonaa mar kale in ciqaab lagu hayo. Oo aroorta, ee wa ka ...
Xeerarka Road for Mobility Gaadhi curyaanku
Si ay u joogteeyaan nolosha firfircoon oo madax banaan, qaar ka mid ah dadka naafada ah iyo waayeelka ku tiirsan yihiin mootooyinka dhaqdhaqaaqa si agagaarka hesho. Waxaa jira tiro ka mid ah xeerarka dalka oo dhan deegaamada kala duwan ee ku saabsan mootooyinka abaabuley. Waa muhiim in la xusuusto sharciyada deegaanka iyo xeerarka dib u ...
Waa Maxay farqiga u dhexeeya Curyaanka ah Electric & Mobility mooto?
Sababtoo ah arrimaha hidde, dhaawac ama gabowga, dadka mararka qaarkood dhaqdhaqaaqa xaddidan oo ay ku tiirsan yihiin qalabka taayir in ku dhawaad ​​hesho. shakhsiyaadka waxay leeyihiin inta u dhaxaysa kursiga curyaanka koronto iyo mooto dhaqdhaqaaqa dooran. Labada of qalabka heli doonaa qof halkaas oo uu u baahan yahay in kiisaska intooda badan tagaan, laakiin ...
Yaa shirkadaha baabuurta dhaqanka BMW baabuur koronto ugu muhiimsan ee ka soo baxa on top
Sanadihii la soo dhaafay, warbaahinta waxaa jiray odhan doonaa in suuqa ee iibka baabuurta badan korontada, waa wax ka badan si fudud si ay ula kulmaan siyaasadda eber-qiiqa California ee (1990, siyaasad ay u baahan tahay in mid kasta oo baabuur eber-emission in la soo saaray kumanaan ka mid ah soo saarayaasha iibinta ca ...
10 Faa'iidooyinka Secret jaleelada of Bike Electric ah
Liiska Tani ma aha la daabacay bogga hore, maxaa yeelay, wax badan oo ka mid ah waxyaabaha ku jira sheekada this qarsoodi ah. Waxaan kuwaas oo baaskiil korontada dhakhso u leeyihiin wanaagsan, oo daruuri ma doonayo in qof walba ogaado sida wanaagsan oo aan u helay. Waxaan la kulma ka thrills of socday mid marwalba xataa marka ay marayaan guryo ku ...